Podcast 1x30 an'ny Actualidad iPad: antsipiriany misimisy momba ny iOS 9 sy ny fanavaozana ny Apple | Vaovao IPhone
Taorian'ny manokana taminay tamin'ny WWDC 2015 tamin'ny herinandro lasa dia niverina niaraka tamin'ny podcast-tsika tamin'ny endrika mahazatra izahay, ary miaraka amin'ireo vaovaon'ny News, Lohahevitry ny herinandro, App an'ny herinandro ary ny fika amin'ny herinandro. Ny zava-baovao ao amin'ny iOS 9 izay tsy nampianarin'i Apple antsika tamin'ny fampisehoana azy, antsipiriany bebe kokoa momba ny Apple Music, ny Jailbreak an'ny iOS 9 ary betsaka kokoa no miandry anao amin'ity podcast vaovao ity. Halahelo azy ve ianao?
1 Vaovao amin'ny herinandro
Vaovao amin'ny herinandro
Apple Music mifanohitra amin'ireo mpifaninana aminy
Apple Music dia hikoriana amin'ny 256Kbps amin'ny iTunes Match
Ny iOS 9 sy ny apps dia mila toerana kely kokoa amin'ny fitaovanao
Ny 7 Jailbreak tweaks izay natambatra / nalain'ny iOS 9
Keen Team dia miasa amin'ny jailbreak iOS 9
HomeKit dia tsy mila Apple TV hiasa
Ny iOS 9 dia ahitana ny fanohanan'ny stylus, manondro ny iPad Pro
Ny fiovana amin'ny klavier ho an'ny iOS9: hamerina ny habeny raha oharina amin'ny famahana
LastPass hacekado, ovao ny teny miafinao
Ny Apple Watch dia hamidy amin'ny magazay tsy ho ela
Efa lany hevitra vaovao ve i Apple?
Samihafa ny haben'ny iCloud backup
ao amin'ny lisitry ny Spotify
Henoy »1 × 30 iPad News Podcast: antsipiriany misimisy momba ny iOS 9 sy ny zava-baovao nataon'i Apple» ao amin'ny Spreaker.
Aza adino fa afaka mandray anjara amin'ny podcast ianao amin'ny fampiasana ny tag #podcastapple. Mba hihainoana azy dia mila tsindrio fotsiny ny bokotra play amin'ny faran'ny lahatsoratra, na misoratra anarana amin'ny podcast en iTunes e ivoox. Ho an'ny fanontana amin'ny ho avy dia efa fantatrao izany azonao atao aza ny manaraka anay mivantana ary mandray anjara amin'ilay resaka. Fampahalalana bebe kokoa amin'ny Ity lahatsoratra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Vaovao IPhone » Podcast » 1 × 30 Podcast an'ny Actualidad iPad: antsipiriany bebe kokoa momba ny fanavaozana ny iOS 9 sy ny Apple
Merge Vid, fitaovana ilaina haingana indrindra hanatevin-daharana horonan-tsary marobe
Fampiharana sy serivisy nanandrana nesorin'i Apple tao amin'ny WWDC